ရိုးရာလေးရဲ့ အပတ်စဉ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍ - YOYARLAY Digital Media and News
ရိုးရာလေးရဲ့ အပတ်စဉ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍ
Published: February 28, 20188:29 am
ရိုးရာလေးရဲ့ အပတ်စဉ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍလေးကို တင်ဆက်ဖို့ အချိန်ကျလာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့
၁။ ဇာစ်မြစ် (Roots)
ဒီစာအုပ်ကို မူရင်းရေးသားသူကတော့ Alex Haley ဖြစ်ပြီး ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့တင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသလောက်တော့ သူ့ရဲ့ ဇာစ်မြစ်အကြောင်းကို ပြန်လိုက်ရင်းကနေ ဒီစာအုပ်ကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ အောင်မြင်ခဲ့သလို ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့လည်း ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြန်ထားတာကတော့ ဆရာမောင်ထွန်းသူပါ။ မူရင်းစာအုပ်ကိုကကောင်းတဲ့အပြင် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လက်ရာကလည်း သေသပ်လွန်းတော့ တစိမ့်စိမ့်ဖတ်ရင်း တမြေ့မြေ့ခံစားလို့ ကောင်းမယ့် စာအုပ်လို့ ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တော်တော်ပေးပြီး ဖတ်ရမှာပါ။ စာဖတ်မြန်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် အနည်းဆုံး ၃ရက်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? စာအုပ်ကြီးက ထူနေလို့လား? တကယ်တမ်း စာအုပ်က ပြောရလောက်အောင်တော့ မထူပါဘူး။ ဇာတ်အိမ်ကြီးလွန်းလို့ပါ။ မျိုးရိုး ၇ ဆက်စာ ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ ဇာတ်အိမ်ကြီးလွန်းတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ အာဖရိကတောတွင်းက လူရိုင်းတွေကို ဖမ်းဆီး ကျွန်ပြုတဲ့ စနစ်တွေ၊ ကျွန်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတန်းစား၊ သခင်ဆိုတာဘယ်လိုလူတန်းစားရယ်လို့ ခွဲခြားပြီး ဆက်ဆံခဲ့ကြပုံတွေ၊ လူဖြူ လူမည်း ခွဲခြားမှုတွေဟာ အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါတုန်းက ဘယ်လောက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ၊ တကယ်လို့များ လူရိုင်းတစ်ယောက်ယောက်ဟာ ရောင်းစားခံလိုက်ရတာနဲ့ သူအိမ်ထောင်ပြုပြီး ရလာသမျှ သား၊သမီး၊ မြေးမြစ်တွေပါ အားလုံး သခင်မိသားစုရဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်ကုန်တာတွေ စသဖြင့် စသဖြင့် မြောက်များလှစွာသော အကြောင်းတရားတွေကို ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်၊ ကျယ်ကျယ်နဲ့ မျိုးရိုး ၇ဆက်စာလောက် မြင်တွေ့ရမှာမို့ စာဖတ်မြန်ရင်တောင် ဒီဇာတ်အိမ်နဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို မှတ်မိဖို့ အချိန်တော်တော်ယူဖတ်ရမယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။စာအုပ်အစပိုင်းမှာ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အာဖရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့တွေ၊ နောက် ဒီထဲက လူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ကျွန်ပြုတဲ့ အချိန်ကစလို့ သူခံစားခဲ့ရသမျှ ဒုက္ခတွေ၊ မျိုးရိုး ၇ဆက်မှာ ၅ဆက်လောက်ထိ ထပ်တလဲလဲ ကျွန်ပြုခံရပြီး ၆ဆက်မြောက်မှာမှ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းခဲ့ရမှုတွေနဲ့အတူ လူသားဆန်ခြင်း၊ လူမဆန်ခြင်းတွေ၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းရဲ့ ကျွန်စနစ်တွေ၊ တောင်ပိုင်းလူဖြူတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင် ဖတ်ရှုလေ့လာရမှာပါ။
၂။ သုခမြို့တော် (The City of Joy )
မူရင်းရေးသားသူ Dominique Lapierre ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုသူက ဆရာကြီး မြသန်းတင့်ပါ။ စာအုပ်အဖုံးမှာပါတဲ့ နာမည်ကသာ သုခမြို့တော်-The City of Joy ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ထဲမှာပါတာကတော့ ညစ်စုတ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ လူနေမှု ဘဝတွေ၊ ရောဂါဘယ ထူလွန်းတဲ့ လူတွေ၊ လူပေါင်းစုံ၊ စိတ်ပေါင်းစုံနဲ့ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ နေရာတွေ .. စာဖတ်သူတောင် ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်လာလောက်တဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ်အတိ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးပါ။ကိုဗင်စကီးဟာ အသက် ၃၀ကျော် ပိုလန်လူမျိုး ဗရင်ဂျီဘုန်းကြီးပါ။ ကာလကတ္တားကို သာသနာပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရောက်လာရင်း ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်တွေ၊ နူနာရောဂါသည်တွေ၊ ချောင်းဆိုးသွေးပါ ရောဂါသည်တွေ၊ ခြေလက်အင်္ဂါ မစုံသူတွေ၊ သန်တွေပေါလွန်းလို့ ဗိုက်ပူနံကားဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့အတူ အမှိုက်ပုံတွေ၊ ကြွက်၊ ယင်၊ ကြမ်းပိုး အစရှိတဲ့ အင်းဆက်ပေါင်းစုံ ရောဂါပေါင်းစုံ ပြန့်ပြူးနေရာ သုခမြို့တော်မှာ နေထိုင်ပြီးကူညီနေပါတယ်။ ဟာရီစပါးဆိုတာကတော့ လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိုးခေါင်ရေရှားတာကြောင့် လယ်တွေကို မိဘတွေနဲ့ ပစ်ထားခဲ့ပြီး မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကိုခေါ်လို့ ကာလကတ္တားမြို့ပေါ်မှာ ကျပန်းအလုပ်လုပ်ဖို့ ထွက်လာသူပါ။ ကျောမွဲလယ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ မြို့ပေါ်မှာ စားစရာ၊သောက်စရာမရှိ၊ အသိမိတ်ဆွေမရှိ အတိဒုက္ခရောက်နေရာက ပလက်ဖောင်းကို အိမ်လုပ်ကာ နေရပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်လွန်းရာက သွေးပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့ အသိဖြစ်ပြီး သွေးခဏခဏဖောက်ရောင်းလို့ မိသားစုအတွက်နဲ့ အသက်ပေးလိုက်ရရှာပါတော့တယ်။ ချောင်းဆိုးသွေးပါ ဖြစ်လာတဲ့ ကိုဗင်စကီးဟာ သူ့ရောဂါအတွက် ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ လမ်းစမမြင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ အရိုးပွဲစားတွေဆီသွား၊ သူ့အရိုးတွေကို ငွေ ၅၀ဝနဲ့ပေါင်ပြီး သူ့သမီးကို အိမ်ထောင်ချပေးဖို့ ကြိုးစားရာက သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့ အခန်းပါပဲ။ ကိုဗင်စကီးအကြောင်းတစ်ခန်း၊ ဟာရီစပါးအကြောင်းတစ်ခန်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖော်ပြရင်း ဇာတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ အဖြစ်အပျက်တွေက မယုံနိုင်စရာပါ။ အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းအမှုတွေ၊ သန္ဓေသားအရင့်အမာတွေကို ကုန်ကူးခြင်းတွေနဲ့ သေဆုံးပြီးတဲ့ လူတွေရဲ့ အရိုးကို နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရောင်းချမှုတွေ … အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ပျက်ဖွယ်၊ စိတ်ညစ်ဖွယ်၊ သနားဖွယ်၊ ရွံရှာဖွယ်၊ စသဖြင့် ဖတ်ရှုရမှာမို့ နှလုံးမခိုင်တဲ့သူတွေ မဖတ်ဖို့တောင် တားမြစ်ချင်မိပါတယ်။ မူရင်းဇာတ်အိမ်ကလည်းခိုင်တဲ့အပြင်ဘာသာပြန်တဲ့သူကလည်းဆရာမြသန်းတင့်ဖြစ်နေတော့အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကြီးကို မျက်လုံးမခွာနိုင်၊ စာအုပ်လက်ကမချနိုင်၊ သက်ပြင်းအခါခါချ၊ မျက်ရည်အခါခါကျ ဖတ်ရတော့တာပါပဲ။ စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတွေပေမယ့် ဖတ်ရမှာတော့ ဘယ်လိုမှ ငြီးငွေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့သာဖတ်ရင်း စွဲသွားမယ့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲလို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ခု ညွှန်းထားပေးတဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဟာ တကယ်ကောင်းပြီး ဇာတ်အိမ်ခိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေမို့ ဘာသာပြန်စာပေကို ဝါသနာပါကြသူတွေဆို မဖြစ်မနေဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ စာအုပ်တွေပါ။ တကယ့်စာအုပ်ကောင်းတွေကို ညွှန်းရတာ တာဝန်လည်းကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မညွှန်းတတ်ရင် စာအုပ်ကို ဖျက်သလိုပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွန်တော့်အညွှန်းဟာ သင့်လျော်တဲ့အညွှန်းဖြစ်ပါ့မလား စိုးရိမ်နေတာပါ။ စာအုပ်တွေရဲ့ မူရင်း ရသကို ကျွန်တော့် အညွှန်းက ဖျက်ဆီးမိသလို ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ရေးသားပြန်ဆိုခဲ့သူ ဆရာကြီးများကို ဒီကနေပဲ ဦးတင်ကန်တော့ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များရှိသွားခဲ့ရင်၊ မပြည့်စုံတဲ့ အညွှန်းများဖြစ်သွားခဲ့ရင် ရိုးရာလေး ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်း ကျွန်တော့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုရင်း
Previous Previous post: Milky way Galaxy ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာလား
Next Next post: ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့
ဘစ်ဘမ်း (Big Bang) မတိုင်ခင်က ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ
လူသားတွေမတိုင်မီက ဒိုင်နိုဆောတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြတယ်။ ကမ္ဘာကြီး မရှိခင်ကတော့ ကြီးမားတဲ့ဓာတ်ငွေ့တိမ်တိုက်တွေရယ်၊ လေထုထဲမျောနေတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေရယ်သာ စကြဝဠာထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မတိုင်ခင်ကရော… Post Views: 2,577
Published: September 28, 20186:26 am
Published: June 6, 20194:25 pm Updated: 5:03 pm